ATAONAO HO IZA MOA JESOSY ? – filazantsaramada
ATAONAO HO IZA MOA JESOSY ?
Publié parfilazantsaramada	 novembre 15, 2013 novembre 19, 2013 Laisser un commentaire sur ATAONAO HO IZA MOA JESOSY ?
« Ary nony tonga tany amin’ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin’ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan’Ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy Ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran’ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Ary ny anabaviny, moa tsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza no nahazoan’Ilehity izany zavatra rehetra izany? » (Matio 13:54-56)
Ao amin’ny fiandohan’ity Matio toko faha 13 ity dia manao fanoharana fito momba ny fanjakan’ny lanitra ho an’ny vahoaka eo amoron-dranomasina Jesosy. Manomboka eo anefa izy dia miditra ao amin’ny synagoga any amin’ny taniny mba hampianatra ny olona. Mazava ho azy fa ny amin’ny sitrapon’Andriamanitra no nampianarin’i Jesosy ireo rehetra tonga tao. Gaga sy talanjona anefa ny olona noho ny fahendrena sy ny asa lehibe nataon’ny Tompo. Inona moa no asany? Ambaran’ny tenin’Andriamanitra, fa izy no ilay mpanasitrana mahagaga: Nanafaka ny aretina rehetra Izy. Nanadio ny boka ihany koa. Fahagagana maro no nataony mba hinoan’ny olona fa zanak’Andriamanitra velona tokoa Izy. Nanova ny rano ho divay tsara Izy. Namoky olona dimy arivo tamin’ny alalan’ny mofo dimy sy hazandrano roa fotsiny Izy. Eny, fa na dia ny maty aza dia natsangany. Mbola mametra-panontaniana anefa ny olona. « Tsy Ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran’ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Ary ny anabaviny, moa tsy ety amintsika avokoa va izy? » Ataon’ny olona ho iza moa Jesosy? Tsy manan-danja amin’ny olona izay rehetra ataon’ny Jesosy ny amin’ny mba hananan’ny olona fiainana. Angamba aza teraka ny fialonana!
Raha ho anao kosa, Betsaka sy tafahoatra loatra ny fitiavan’ny Jesosy anao. Nanangana anao ho zanaka mpandova Izy. Tamin’ny nanolorany ny ainy ho anao teo ambony hazo fijaliana no nanatanterahany izany. Saingy, tojo olana anefa ianao ka tonga tao aminao ity hevitry Asafa ao amin’ny Salamo 73:3: « Satria nialona ny mpirehareha aho, raha nahita ny fiadanan’ny ratsy fanahy » ity. Dia hilaza ve ianao fa miangatra aminao Jesosy? Tsia. Fa hoy Izy ao amin’ny Matio 13:30 « Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin’ny fararano; ary amin’ny fararano dia holazaiko amin’ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana ; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro. » Manomana anao ho any an-tsompitr’Andriamanitra ny Tomponao. Tsy inona akory fa ny fiainana mandrakizainao izany. Ataonao ho iza moa Jesosy? Hoy i Simona Petera: « Hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona. » Matio 16:16b
Publié parfilazantsaramada novembre 15, 2013 novembre 19, 2013 Publié dansUncategorized
FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/ FEON’NY FILAZANTSARA
Club Feon’ny Filazantsara Lycée Nanisana